सवारी चलाउँदा फोनमा कुरा गरे ६ महिना लाइसेन्स निलम्बन ! – Tourism News Portal of Nepal
२७ भदौ, काठमाडौं । तपाईं गाडी वा मोटरसाइकल चलाउँदा फोनमा कुराकानी गर्नुहुन्छ ? अब सचेत रहनुहोला ।सरकारले फोनमा कुरा गर्दै सवारी चलाउने चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने प्रवधानसहितको नयाँ नियम ल्याउँदैछ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा सवारी चलाउँदा फोनमा कुरा गरेको पाइएमा ६ महिनासम्म लाइसेन्स निलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एक पटकभन्दा बढी मापसे पनि महंगो पर्ने
सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु निषेध
लापरवाहीले ज्यान गए लाइसेन्स खारेज